Imibhalo-ngqangi yoMzimba waNgaphandle (s) X MeeM عَ Podcast · Oyoun | Ukucinga ngokutsha kwenkcubeko
« Ikhefu kunye noQhagamshelwano
Imibhalo-ngqangi yomzimba wangaphandle (s) isiganeko sephaneli yovavanyo olubonakalayo, ethatha iifom zokubonakaliswa kwamabali ukuba imizimba ye-Queer & Trans * yombala ibambe njengendlela yokuphila, ukusuka kwintlungu ukuya kwimeko yokuqina njengomjikelo, ukuya phakathi.
Imibhalo-ngqangi yoMzimba waNgaphandle (s) yiprojekthi ebaluleke kakhulu esekwe kwindibano yocweyo esekwe ngu-Ahmad B َ ab َ a (igcisa lamaqela ahlukeneyo) kunye noMichalina Mrozek (umlawuli wefilimu) ecebisa indlela ye-TLGBQIA + imizimba yombala njengemibhalo-ngqangi yezinto ezimbini; ukuba ziindawo zengcinezelo kwakunye neendawo zokomelela.
Isiganeko siya kubonisa imibhalo yesandla ebonakalayo kunye nezixhobo zokusebenzela, ezikhokelwa ngabaculi be-4: Naya (lux Venera), Mandhla Ndubiwa, Isu Mignon Mignonne, kunye no-Ahmad B َ ab َ a; Ukuphanda iminqweno kunye neentlobano zesini njengenkqubo yengcinezelo, iindlela ezinqamlezileyo zokubonakaliswa kunye nokuchithwa kwempilo yengqondo, kwi-lens ye-postcolonial kwi-femininity, kunye nobunikazi kunye nokubonakaliswa njengendlela yabantu.
Kulo mcimbi abaphulaphuli baya kujoyina amagcisa kwisangqa esivulekileyo esiza kubonisa imibhalo yesandla ekhethekileyo yomsebenzi obonakalayo owenziwe ngokubambisana nabaculi, ukuya kuhambo lweengxoxo malunga nezihloko, ukuphakamisa imibuzo, ukugxeka kunye nokudibanisa ngokudibeneyo amazwi izihloko ezahlukeneyo ezifuna ukuqwalaselwa.
Inxalenye yale projekthi yayikwayingxoxo yephaneli ye-intanethi yeBodies and Borders: Berlin X Stettin, ephethwe ngu-Ahmad Baba, imema i-activist ye-queer evela eStettin, ePoland, uMonika Tichy kunye noSara ngemibuzo ejikeleze, indlela ipolitiki ichaza ngayo imida, kunye nendlela imida ekujoliswe kuyo abantu abambalwa kunye. yenza umonakalo kwimizimba engabalulekanga yombala (QTBIPOC).
Umsitho uza kubhengeza nokukhutshwa kwe-MeeM عَ Podcast: indlela ebaluleke kakhulu evela / eya kwi-Queer * Arabs * ehlala eBerlin, ikhanyisela imiba yezazisi, amava kwaye ngandlel 'ithile ithatha uhlobo logcino lwamabali adinga ukuviwa nokubonwa. ukusuka kwezinye iimbono, ukwakhiwa kwemibono ephosakeleyo, i-stereotypes, iilensi zocalucalulo, kunye nokuvuselela iqonga lokusebenza njengelizwi labaninzi. Nge: UMaria Aicha Boumeddiene, uNael Iskandarani, u-Imad Gebrayel, u-Hassan Dibb (u-Queen of Virginity) kunye noFadi Saleh.
→ Intetho yephaneli isimahla, kodwa ubhaliso luyafuneka. Bhukisha itikiti lakho lasimahla Apha.
Ahmad Baba ligcisa lamaqela ahlukeneyo kunye nentlalontle, okwangoku i-dance movement therapist (MA) ekwenzeni, ukuphanda ukuhlangana kwezobugcisa kunye nezopolitiko zomzimba zesini, kwimpilo yengqondo kuluntu oluhlelelekileyo. Ukususela ngo-2016, ukucinga kunye nokuphuhlisa i-pragmatic ebalulekileyo yeeworkshops ezihlangeneyo kunye neeprojekthi ezibonakalayo, kunye namaqela e-QTBIPOC kunye namagcisa, kugxininise kwiingxelo ezizezinye zesazisi (s), kunye nendlela eyahlukileyo yamava engcinezelo (s) ukuba uluntu lombala lujongene nentshona. umxholo.
IG: baba.ngokuchasene bedlala
UMichalina Mrozek ungumdlali wefilimu kunye nomfundisi wefilimu oye wasebenza njengomdlali wefilimu ozimeleyo eBerlin ukususela ekuqaleni kwe-2013. Uneminyaka emininzi yamava kumsebenzi wokufundisa kunye nolutsha kunye nolutsha njengomphathi weprojekthi kunye nomenzi wefilimu. Kule minyaka mine idlulileyo, uye waqonda ngakumbi iiprojekthi kunye ne-LGBTQ + uluntu olujonge ukubonakala ngakumbi kunye nokunyamezelana (website, bedlala).
I-LUX VENEREA (aka Naya de Souza) liqhula, isithethi, umpheki, umdlali, imbongi, cangaceira transviada. Ushiye iSertão yaseBrazil ukuya kuba yitravesti *. Kananjalo ushiye amatyala ebhankini yaseBrazil kwaye ukholelwa ukuba iingwenya ezileleyo ziguqulwa zibe ziingxowa zabantu beYT.
(IG: Federal Chancellor).
UMandhla ligcisa elidlalayo elineminyaka engama-24 ubudala elidlalayo nelingabonakaliyo elizalelwe kwaye lakhulela eZimbabwe, eAfrika. Njengomhlali wangoku eBerlin, uzisa umxube wovavanyo lweR&B kunye nomculo womphefumlo odityaniswe noqikelelo olubonakalayo kunye nomdaniso odlalayo. Ubugcisa bakhe buphonononga izilingo zemihla ngemihla ezithi imizimba ye-trans *, enby kunye ne-femme * ibe nothando, isazisi, isini kunye nokwamkelwa. Umthandi owomeleleyo wefashoni, ubugcisa be-vogueing kunye nomculo, uthembisa ukukuzisela amava akuthatha akuse kwilizwe lobuhle kunye ne-epiphanies yobuThixo ngokumelwa okukhohlakeleyo kunye ne-femme emnyama * amandla (IG: mandandbiwa).
Isu Mignon Mignonne imibuzo ukuba yona ngokwayo * ibonakala njani emhlabeni, kwaye ilijija kwiindidi ezahlukeneyo zokusebenza. Inokuba yinkcubeko, inokuba yi-multi-layered, ingaba yi-cathartic. Ivusa ukufa kwe-queer engabonakaliyo ngesikrini esiluhlaza. Inxiba umzobo wesetyhini njenge-anaglyph 3d illusion. Ibuyisela amandla okwenza isixhobo somzimba womntu kwaye idumise umngxuma ongcwele ngokungcangcazela kwenyoka (IG: isu_mignon_mignonne, Iwebhusayithi).
Inkxaso-mali yeNgxowa-mali ye-Socioculture evela kwiprogram ye-Federal Government Commissioner yeNkcubeko kunye neMedia (BKM) "NEUSTART KULTUR"
Kunye. Yenza. Inkxaso ye-WIR der Ezahlukeneyo yinxalenye yenkqubo yomanyano Abantu Bomeleza Abantu kwaye ixhaswa ngemali yi-Federal Ministry for Family, abadala, abafazi kunye noLutsha.
IBhunga lezeNtlalo lasePoland eV
Ngenkxaso yobubele ye-Städtepartner Stettin eV
Ingcebiso nge-Gay Berlin
I-MeeM عً Podcast: Ixhaswe ngemali yi-Federal Minister for Family, abadala, ababhinqileyo, kunye noLutsha, njengenxalenye yeNkqubo yeFederal for Living Democracy.
◥ Nceda uqaphele: Imigaqo ye-2G Plus iyasebenza kwesi siganeko. Iimaski ze-FFP2 zinyanzelekile e-Oyoun de kube esinye isaziso. Ulwazi oluthe vetshe malunga nococeko lwethu lunokufumaneka Apha.
◥ E-Oyoun, akukho ndawo yocalucalulo ngokwesini, intiyo, i-queerphobia, i-transphobia, naluphi na uhlobo lobuhlanga okanye ucalucalulo olufana nokuchasa uMnyama, ukuchasa amaSilamsi okanye ubuhlanga obuchasayo ubuJuda, kunye nalo naluphi na uhlobo lokuziphatha ngobundlobongela okanye ndlongondlongo. I-Oyoun inikezela ngendawo ekhuselekileyo kubo bonke, iforamu evulekileyo yengxoxo kunye nendawo apho sixhasana kwaye simelane. Ukuba kukho umntu / kukho into ekukhathazayo ngexesha lomsitho, nceda uqhagamshelane nelungu labasebenzi bethu abakhoyo ukuze bancede! Ukuba ufuna ukwabelana nathi ngamava emva kwesiganeko, nceda usibhalele i email okanye usithumelele umyalezo ongachazwanga ngegama lethu Website.
Nge-10 kaDisemba ngo-2021